Echegbula Onwe Gị | Matiu 6:25 | Ihe Baịbụl Kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Ngangela Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
IHE BAỊBỤL KWURU: “Kwụsịnụ ichegbu onwe unu banyere mkpụrụ obi unu.”—Matiu 6:25.
Gịnị ka ọ pụtara? Jizọs kwuru ihe ahụ mgbe ọ na-akụziri ndị mmadụ ihe n’elu ugwu. Otu akwụkwọ na-akọwa okwu ndị dị na Baịbụl kwuru na n’asụsụ Grik, a sị na mmadụ na-echegbu onwe ya, o nwere ike ịbụ “echiche mmadụ na-eche n’ihi na ọ dara ogbenye ma ọ bụ n’ihi na agụụ na-agụ ya ma ọ bụkwanụ n’ihi nsogbu ndị ọzọ na-abịara ya kwa ụbọchị.” Mmadụ nwekwara ike ịna-echegbu onwe ya gbasara ihe ndị nwere ike ime n’ọdịnihu. Ọ dịghị njọ ma anyị na-eche gbasara ihe ndị na-akpa anyị na otú ihe ga-esi agara ndị ikwu na ibe anyị. (Ndị Filipaị 2:20) Ma, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya sị: “Unu echegbula onwe unu.” Ọ chọghị ka ha na-echegbu onwe ha maka echi, n’ihi na ọ ga-eme ka ha ghara inwe obi ụtọ ha kwesịrị inwe maka ụbọchị ọ bụla ha dị ndụ.—Matiu 6:31, 34.
Ọ̀ bara uru taa? Anyị mee ihe a Jizọs kwuru, ọ ga-abara anyị uru. N’ihi gịnị? Ihe e kwuru n’akwụkwọ ụfọdụ e ji eme nchọnchọ gosiri na ọ bụrụ na anyị ana-eche oké echiche, ọ ga-eme ka akwara ndị dị́ anyị n’ahụ́ na-arụ ọrụ n’ezughị ike. Ihe a nweziri ike ime ka anyị nwee ọrịa ndị dị ka ọnyá afọ, ọrịa obi na ụkwara ume ọkụ.
Jizọs kwuru ihe mere anyị kwesịrị iji ghara ịna-echegbu onwe anyị. O kwuru na ọ baghị uru. Jizọs jụrụ, sị: “Ònye n’ime unu pụrụ ịgbakwụnye otu kubit n’afọ ndụ ya site n’ichegbu onwe ya?” (Matiu 6:27) Ichegbu onwe anyị agaghị emeli ka ndụ anyị gbatịkwuo, ma ya fọdụzie ime ka ndụ anyị ka mma. Mgbe ụfọdụ, ihe anyị na-atụ ụjọ na ọ ga-eme anaghịdị emecha mee. Otu nwoke gụrụ akwụkwọ kwuru, sị: “Mmadụ ichegbu onwe ya maka ọdịnihu abaghị uru, n’ihi na ọdịnihu anaghị adịcha njọ otú anyị chere.”
Oleezi otú anyị ga-esi kwụsị ịna-echegbu onwe anyị? Ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịtụkwasị Chineke obi. Ọ bụrụ na Chineke na-enye anụ ufe nri, na-eyiwe okooko osisi uwe mara mma, ọ̀ bụ na ọ gaghị enye ụmụ mmadụ, ndị ji obi ha niile na-efe ya, ihe niile dị́ ha mkpa ná ndụ? (Matiu 6:25, 26, 28-30) Ihe nke abụọ anyị ga-eme bụ ịghara ịna-echegbu onwe anyị maka echi. Jizọs kwuru, sị: “Unu echegbula onwe unu mgbe ọ bụla maka echi, n’ihi na echi ga-enwe nchegbu nke ya.” Ọ̀ bụ na i kwetaghị na “ihe ọjọọ nke ụbọchị nke ọ bụla ezuworo ya”?—Matiu 6:34.
Ọ bụrụ na anyị emee ihe a Jizọs kwuru, anyị agaghị na-arịa ọrịa ndị oké echiche na-akpata. Nke kadị mkpa bụ na obi ga-eru anyị ala, ya bụ, na anyị ga-enwe ihe Baịbụl kpọrọ “udo nke Chineke.”— Ndị Filipaị 4:6, 7.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Echegbula Onwe Gị